Ndepụta nke njehie zuru ezu N'ihi nrụrụ aka data nke MS Access
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Ndepụta nke Njehie
Ndepụta nke njehie zuru ezu N'ihi nrụrụ aka data Microsoft
Mgbe ị jiri Microsoft Access mepee nchekwa data Access mebiri emebi, ị ga-ahụ ozi mperi dị iche iche, nke nwere ike bụrụrịrị gị mgbagwoju anya. Yabụ, lee, anyị ga-anwa ịdepụta njehie niile enwere ike, wee nwee ike gụpụta ha kwa ugboro. Maka njehie ọ bụla, anyị ga-akọwa mgbaàmà ya, kọwaa ihe kpatara ya ma nye faịlụ nlele yana faịlụ edozi site na ngwa nnweta nnweta anyị. DataNumen Access Repair, ka i nwee ike ịghọta ha nke ọma. N’okpuru anyị ga - eji ‘filename.mdb’ gosipụta aha faili MDB mebiri emebi.
Amatabeghị data database 'filename.mdb' (Error 3343)
Akpadoro nchekwa data 'filename.mdb ma ọ bụ na ọ bụghị faịlụ nchekwa data. (Error 2239) Gị ma ọ bụ onye ọrụ ọzọ nwere ike ịkwụsị Microsoft Office Access na-atụghị anya ya ebe nchekwa data Microsoft Office Access mepere. Chọrọ Microsoft Office Access iji gbalịa rụkwaa nchekwa data?
Nchọpụta data Microsoft Jet enweghị ike ịchọta ihe 'xxxx'. Gbaa mbọ hụ na ihe dị adị na ịsụpe aha ya na aha ụzọ ya nke ọma. (Njehie 3011)
Enweghị ike ịgụ ndekọ (s); enweghị ọgụgụ isi na 'xxxx' (Error 3112)
Enweghi ike imeghe nchekwa data 'filename.mdb'. O nwere ike ọ gaghị abụ nchekwa data nke ngwa gị na-amata, ma ọ bụ faịlụ ahụ nwere ike imebi. (Njehie 3049)
I nweghi ikikere di nkpa iji ihe 'filename.mdb'. Mee ka onye nchịkwa sistemụ gị ma ọ bụ onye kere ihe gosipụta ikikere kwesịrị ekwesị maka gị. (Njehie 3033)
Datadị data data na-ezighi ezi (Njehie 3259)
Na-atụghị anya njehie 35012
Mgbanwe ndị ị rịọrọ na tebụl enweghị ihe ịga nke ọma n'ihi na ha ga-emepụta ụkpụrụ abụọ na ndeksi, isi ihe, ma ọ bụ mmekọrịta. (Njehie 3022)
Microsoft Access achọpụtala na nchekwa data a dị n'ọnọdụ na-ekwekọghị ekwekọ, ma nwaa ịnwa iweghachite nchekwa data ahụ. N'ime usoro a, a ga-eme nnomi nchekwa data nke nchekwa data na ihe niile enwetara na nchekwa data ọhụrụ. Willnweta ohere ga-emeghe nchekwa data ọhụrụ. Aha ihe ndị na-enwetaghị nke ọma ga-abanye na tebụl "Njehie Iweghachite". (Njehie 9505)
Microsoft Access na-arịọ maka okwuntughe mgbe ị na-emepe ọdụ data rụrụ arụ.
Enweghị ike imeghe nchekwa data n'ihi na ọrụ VBA dị na ya enweghị ike ịgụ. Enwere ike imeghe ebe nchekwa data naanị ma ọ bụrụ na ehichapụ ọrụ VBA. Ihichapụ ọrụ VBA na-ewepu koodu niile site na modulu, ụdị na akụkọ. Kwesịrị ịkwado nchekwa data gị tupu ịnwa imeghe nchekwa data ma hichapụ ọrụ VBA. (Njehie 29081)
'Id' abughi ndekota na okpokoro a. ma obu 'AOIndex' abughi ndekota na okpokoro a. (Njehie 3800)
Ọ bụghị ezigbo ibe edokọbara. (Njehie 3159)
Edebere njehie (- ####); enweghị ozi maka njehie a. (Njehie 2626/3000)
Faịlụ a nwere ike ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na ọ nwere koodu nke ezubere iji mebie kọmputa gị.
Maka amaokwu gị, anyị na-anakọta ndepụta zuru ezu nke njehie nnweta maka ụdị nsụgharị Access dị iche iche:
Ndepụta zuru ezu nke Njehie 2003
Ndepụta zuru ezu nke Njehie 2007
Ndepụta zuru ezu nke Njehie 2010
Ndepụta zuru ezu nke Njehie 2013
Ndepụta zuru ezu nke Njehie 2016